ဦးဆောင်ပြင်ပတွင်အလင်းအိမ် > ဦးဆောင်တိပ် > Product-List
110 / 240V AC အ SMD 5050 ချွတ်အလင်းဦးဆောင်ပြီး 110 / 240V AC အ SMD 2835 ချွတ်အလင်းဦးဆောင်ပြီး 110 / 240V AC အ SMD 5730 ချွတ်အလင်းဦးဆောင်ပြီး 110 / 240V AC အ SMD 3014 ချွတ်အလင်းဦးဆောင်ပြီး
12V DC က SMD 5050 ဦးဆောင်ပြီးချွတ်အလင်း 110 / 240V AC အ SMD 5050 ကြိုး LIGHT LED 110 / 240V AC အ SMD 2835 ကြိုး LIGHT LED 110 / 240V AC အ SMD 5730 ကြိုး LIGHT LED
110 / 240V AC အ SMD 3014 ကြိုး LIGHT LED 12V DC က SMD 5050 LED မီးကြိုး LIGHT အဘယ်သူမျှမကြေးနန်း SMD 5730 ချွတ်အလင်းကိုဦးဆောင် 110V AC အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး SMD 5730 ချွတ်အလင်းကိုဦးဆောင်
240V AC အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး SMD 5730 ချွတ်အလင်းကိုဦးဆောင် 110V AC အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး SMD 5730 LED မီးကြိုး LIGHT 240V AC အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး SMD 5730 LED မီးကြိုး LIGHT 12V DC ကနီယွန် Flex အလင်း LED
12V DC ကကြိုးအလင်းဦးဆောင်ပြီး 110 / 240V AC အ LED မီးနီယွန် Flex အလင်း တရုတ်နီယွန် Flex အလင်းဦးဆောင်ပြီးကြိုးအလင်း LED
1. 110 / 240V AC အ 12V DC က SMD 5050 2835 5730 3014 ချွတ်အလင်း LED
2. 110 / 240V AC အဘယ်သူမျှမကဝါယာကြိုး SMD 5730 ချွတ်အလင်း LED
3. 12V DC က 110 / 240V AC အ LED မီးနီယွန် Flex အလင်းကို LED ကြိုးအလင်း
110 / 240V AC အ 12V DC က SMD 5050 2835 5730 3014 ချွတ်အလင်း LED. ( 110 / 240V AC အ 12V DC က SMD 5050 2835 5730 3014 ချွတ်အလင်း LED )
110 / 240V AC အ 12V DC က SMD 5050 2835 5730 3014 ချွတ်အလင်း LED
တရုတ်နိုင်ငံ ဦးဆောင်တိပ် တင်ပို့သူ
အဘို့အရင်းမြစ် ဦးဆောင်တိပ် Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်မှာထုတ်လုပ်သူ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ ဦးဆောင်တိပ် Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ ဦးဆောင်တိပ် ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်မှာ။
အဆိုပါ featured တရုတ်ဂွမ်ဒေါင်း ဦးဆောင်တိပ် ဤနေရာတွင်စာရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် karnar အလင်းရောင်အားဖြင့်ရင်းမြစ်ထားတဲ့နေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဦးဆောင်တိပ် လက္ကား
ZhongShan ဦးဆောင်တိပ် တင်ပို့သူ
ZhongShan ဦးဆောင်တိပ် လက္ကား
ZhongShan ဦးဆောင်တိပ် ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
ဂွမ်ဒေါင်း ဦးဆောင်တိပ် ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
Guzheng မြို့ ဦးဆောင်တိပ် ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED